CABUDWAAQ: Iibka Xoolaha Nool oo hoos u dhacay – Radio Muqdisho
Hoos u dhac ayaa ku yimad qiimaha la kala siisto xoolaha nool gaar ahaan Ariga suuqa degmada Caabudwaaq ee Gobalka galguud.
Wariye Cabdukariin Axmed Bulxan ayaa ku soo warramaya in hoos u dhacu uu gaaray heer uusan tagin 10kii sano ee la soo dhaafay sida ay sheegeen dadka ka ganacsada.
“Ariga jarta ah hoos ayuu u dhacay, waxaa u sabab ah suuqa oo aan waayadaan waxba lagu kala iibsan” ayuu yiri mid ka mid ah suuqleyda oo la hadlay Radio Muqdisho.
“Riyaha xataa qiimahoodu hoos ayuu u dhacay, Shan boqol ayaa la kala siisanayaa, dadka degaankani waxay ku tiirsanaayeen xoolaha nool siiba kuwa jarta ah, haddase qiimaha ayaa hoos u sii dhacay si uusan waayadaan gaarin” ayuu sii raaciyay.
Sidoo kale suuqyada Hiiraan ayaa laga dareemayaa hoos u dhac dhinaca beeca xoolaha nool ah.